Qaadka iyo doorka haweeynka
» Qaadka iyo doorka haweeynka
Waxaan ognahay in qaadku ka mid yahay mukhadaraadka waa weyn ee saameynta ku yeeshay bulshadeena Somaliland ama dadka soomaalaida ahba. Waxa daroogada cagaaran ee qaadku dhib u geystaa sharafka, hantida qof kasta oo cuna.Hadaba waxa la yaab noqotay in casrigani maanta ay jiraan haween fara badan oo raga kula tartamaya cunista, faafinta daroogadan, halka waayadii hore ay ceeb ahayd in la arko haweenay qaad cunta, manta-se waxa la odhan karaa waa ay isugu fanaan oo haweenayda aan cunin waa mid ka indha xidhan oo aan la socon casriga oo gaabisa.Laakiin runtu waxa ay tahay in haweenka cuna qaadku ay yihiin aafo aan aaafo kale ka danbeynin oo soo wajahday guud ahaan dadka soomaalida ah. Waxa ayna keenaysaa dhib joogto ah oo ka dhexda qoyska iyo bulshada dhinacyadeeda kala duwan, Maxaa yeelay haweenaydu waa qoftii loo baahnaa in ay hagto, dhaqaaleyso, daryeesho aqalka iyo carruurta.Hdii howshaas la waayana waxa aan shaki ku jirin in bulshada ku soo deynayaan dhalaan aan edeb lahayn, taasina waa khasaare aad u badan oo aaan sahlanayn daweenteedu.Hadaba hadaan u soo noqono dumarkeena Somaliland iyo doorka aan la qarin karin ee ay ka qaateen dhooofinta, keenida, cunida iyo iibinta mukkadaraadka qaadka waa mid ka muuqda suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, kuwaas oo maalinba maalinta ka dsanbeysa si xoog leh ugu soo kordhaya. Waxa ayna gaadhsiisan tahay meel aad u fog oo ay uga gudbi karaan ka ganacsiga daroogooyinka kale sida xashiishada, khamarada iyo wixii kale ee la halmaala.Waxa iyana xusid mudan in dumarka qaarkood ay aaminsan yihiin in qaadku uu gaadhsiinayo haybad, sharaf, horumar iyo sinaan. Hdaba su’aasha isweydiinta mudani waxa ay tahay ma gaadh siinyaa qaadku dumarka horumar sinaan iyo sharaf? Waxa hubaal ah in dad bani ku jawaabayaan “Maya!”.Marka laga reebo haweenka ka ganacsada qaadka waxaa lagu qiyaasaa kuwa raamsada oo kaliya cadad dhan 10% Somaliland. Waxa kaba sii daran in dumarkaasi ay la jaadaan rag, taasina ay ka dhalan karto dhibaato kale.Akhrista waxaan filayaa in aan ogaanay in ay jiraan dumar badan oo qaatay caadadaas laakiin ma isweydiiney: Maxaa dumarka ku khasbay in ay qaadaan wadadan qaldan?
Waxa aan odhan karnaa in haweenku ay jaadaan ama ka gancasdaan waxaa kow ka ah ragga soomaalida oo raamsda caleentani cagaaran. Waxaana tusaale inoogu filan dhacdadani 1981-kii ka dhacday magaalada Ziyeelow oo ah mudaharaad ay sameynayeen dumar soomaali ah, kagana cabanayeen ragooda oo ku dhex milmay cunista daroogada cagaaran. Waxa ayna dumarkaasi sheegteen rag la’aan iyo msaruuf la’aan. Waxa haweenkaasi muslimiinta ah aqalkooda ka soo saaray waa arrin aan la dhayalsan karin. Waxaana ka dhalan kara arrintani su’aal dhaqaale oo ah ragaa qaadka cunaa ma masruufi karaan carrurta, mise waxbuu ka dhimaa? Wey iska cadahay in qaad cunaha aanu amaan galinaynin masruufka carruurtiisa, taasina dhalin karto in dumarkuna ay qaadaan talaabooyin la mida midka uu qaaday ninkeedu.S kale hadaan u eegno Asbaaha dumarka ku dhiiri geliya cunista qaadka waxaan tusaale kale usoo qaadan karnaa cilmi baadhis ay sameeyeen aqoonyahanada dhirta maanka doorisa oo ay ku sheegeeen sidan:1. Hadii ninku yahay mid ka ganacsada qaadka wey qaadan kartaa ama wey u nugushahay haweenaydiisu.
2. Hadii laba waalida ama Laba walaalo ah ay ka baayacmushtareeyaan qaadka waxay u badan tahay in dumarkooduna ay qaadan karaan dhex galka kuwa ku mashquulsan ka ganacsiga daroogadani
3. La saaxiibid qofka cuna qaadka ama u adeegida kan ka ganacsadaGuntii iyo gabagabadii waxa aan ku soo afmerinyaa maqaakkani in dumarka Somaliland ee ku hawlan iibinta, cunida iyo faafinta qaadku uu yahay mid lid ku ah diinteena iyo dhaqankeeena. Sidaa darteeedna waxa aan usoo jeedinayaa haweenka in ay ka waantoobaan caaadadaasi isla markaana ay ogaato in ay ku xad gudbayso xuquuqda ninkeeda, ilmaheeda oo ay ka dhalan karaan guul darro la soo gudboonaata qoys muslin ah, kuna farxayaan dadka raba in ay dhaqan dooriyaan bulshada.Axmed Hanad Guray Baqaye
Burco – Somaliland